गुमेको शाख फर्काउने उपसभामुखको प्रयास, दशैँ भत्ता दान गर्ने घोषणा !
घाटगाउँ डटकम मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०४:०२:००
४ कार्तिक, सुर्खेत । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार ढाल्ने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि गुमेको शाख फर्काउन कर्णाली प्रदेश सरकारकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीले दशैँ भत्ता दान गरेकी छिन् ।
सोमबार उनले दशैँखर्च वापत प्रदेशसभाबाट आएको भत्तालाई विभिन्न दिनदुःखीको सेवाका लागि वितरण गरेकी हुन् । यसका लागि उनले ३० हजार आश्रमलाई मात्रै दिएकी छिन् । वीरेन्द्रनगर लाटीकोइलीमा रहेको प्रशान्त वृद्धाश्रमलाई उनले १५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकी छिन् ।
यस्तै वीरेन्द्रनगरमै रहेको मानव सेवा आश्रमलाई पनि उनले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छिन् । प्रशान्त वृद्धाश्रम र मानवसेवा आश्रम पछिल्लो समय सुर्खेतमा स्थापित संस्था हुन् ।
यस्तै उनले पूर्वमाओवादी लडाकुको उपचारमा १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छिन् । कालिकोटका पूर्वमाओवादी लडाकु अभियानको मृगौला रोगको उपचारका लागि उपसभामुख घर्तीले १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । यद्यपी यो रकम हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । अभियान काठमाडौंको एक अस्पतालमा डायलासिस गराईरहेका छन् ।
यस्तै उनले १० हजार रुपैयाँ पत्रकार प्रभात चलाउनेको उपचारमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । अहिले विप्लव निकट नेकपा सम्बद्ध संगठनमा आवद्ध चलाउने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव हु््न् । जाजरकोट घर भएका उनी केहीदिन अगाडी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते भएका छन् । उनको उपचार चलिरहेको छ ।
असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा उपसभामुख घर्तीले पनि हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । पूर्व एमाले नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा उपसभामुख घर्तीसहित तीन जना पूर्व माओवादी सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको हस्तक्षेपपछि अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमै प्रस्तुत हुन नपाई तुहिएको थियो । उपसभामुख भएर पनि गुटमा लागेको र पदको गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै घर्तीको आलोचना भएको थियो ।
पार्टीभित्रैको अन्तरविरोधले अविश्वासको प्रस्ताव तुहिएकोमा व्यक्तिगत रुपमा उनले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै खुशी व्यक्त गरेकी थिइन् ।
यद्यपी यसरी दशैँ भत्ता दान गर्नुको पछाडी शाखभन्दा पनि महामारीमा समेत जनताले तिरेको करबाट भत्ता बुझ्ने नेताहरुको चर्को आलोचना हुन थालेपछि उनले भत्ता फिर्ता गर्नुको साटो दान गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
संघीय सांसदले समेत दशैँ भत्ता बुझेपछि चर्को आलोचना हुँदा यो विषय प्रदेशसभामा पनि उठेको थियो । सोहीअनुसार उपसभामुख घर्तीले पनि भत्ता बुझेको पाइएपछि थप आलोचना हुने डरले उनले सो रकम वृद्धाश्रम र पूर्व माओवादी लडाकुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न किन लागिन् उपसभामुख घर्ती ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०४:०२:००
चौकुनेका युवक रावलको दक्षिण कोरियामा मृत्यु मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०४:०२:००
पन्त र शाहीको हातमा रविन्द्र स्मृती ब्याडमिन्टन प्रथम पुरस्कार मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०४:०२:००
भेरी कर्णालीको दोभान विकास गर्ने कहिले ? मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०४:०२:००
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०४:०२:००